Micro Chinja, Toggle Chinja, Limit Chinja - LEMA
LZ7 Yakasimbiswa Limit Shandura
Lema PBS-003 yebhuruu akatungamira kusunda bhatani switch ne m ...
Wholesale KW12-93 Water hita Electrical Micro ...
Lema KW12-1S 3 pini dzemagetsi microswitch genera ...
Lema KW7-32L sikuruu inouraya snap chiito micro s ...
Lema KW7-0II kaviri snap chiito chinja magnetic ...
Zvinoenderana nenzvimbo dzakasiyana dzekushandisa, tinogona kutungamira vatengi pamaitiro ekuisa uye kushandisa switch, kana kupa vatengi mazano pane izvo sarudzo maererano nezvinodiwa zvehunyanzvi.
Kana chigadzirwa chikatadza kushanda panguva yekushandisa, isu tinobatsira vatengi mukuongorora chinokonzera dambudziko kuburikidza nerunhare, email, uye zvisirizvo zvigadzirwa zvechigadzirwa. Kana zvichidikanwa, tinogona kutumira vashandi vehunyanzvi kunzvimbo yemutengi yekugadzira kuti vabatsire pakuongorora kuti vaone kuti dambudziko ragadziriswa zvakanaka.
Zvinoenderana nenzvimbo yemutengi yekushandisa, isu tinogona kubatsira vatengi kugadzira bvunzo michina inoenzanisira nharaunda yekushandisa kuyedza zvigadzirwa zvakasarudzwa kuona kuti chigadzirwa chinogona kusangana nezvinodiwa nharaunda yekushandisa, uye nekupa mhedzisiro yemhedzisiro mhedzisiro.
Ipa rairo rakakodzera panguva yehunyanzvi kubatsira vatengi mune chaiyo kuiswa uye kushandiswa kwezvigadzirwa. Munguva yekuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva, inogona kubatsira vatengi mukubudirira kupedzisa dhizaini nekuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva uye nekukurumidza kugadzirisa mibvunzo inosangana mukushandisa kwechigadzirwa, kuitira kuti chigadzirwa chigone kunyatso shandiswa kune zvinotsigira zvigadzirwa.
Zhejiang Lema Magetsi Co, Ltd.iri Wenzhou City, Zhejiang Province. Iyo kambani yakavambwa muna 1986 Lema yakazvipira kuR & D, kugadzirwa uye kutengesa kweanodzora maindasitiri emagetsi switch. Zvigadzirwa zvekambani zvinosanganisira micro switch uye kufamba (muganho) Chinja, bhatani bhatani switch, tsoka switch, switch switch, zadzisa muchengeti, AC simba socket. Mushure memakore angangoita makumi matatu ekugadzika kwakadzikama, Lema ave hombe-hukuru hunyanzvi hwekugadzira micro switch muChina. Iyo kambani parizvino inovhara nzvimbo inopfuura 11,000 mativi emamita.
DZIDZISA switch switch nyanzvi yekugadzira
IVA NEMAHARA L CHIEDZERO CHOKUDZIVIRIRA UYE DUKU Vhorumu
TARISA PAKUKUDZWA KWECHIDZIDZO MUMUNDA YEMAHARA HWEMAHWANDA INDUSTRIAL AUTOMATION.
SHELL INE PAMUSORO PAMASIMBA PASIMBA NEMAVHANGANO AKAKAIPA
Isina mvura michina switch inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo nyoro. Dhigirii redziviriro rinosvika IP67. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yemumba, michina. Fekitori yedu inopa dzakasiyana siyana dzesina mvura michina switch nehukuru hwakasiyana. Lead waya inogona customized kubudikidza chinodiwa.
Electronica Munich ndeimwe yezviitiko zvikuru zvepasirese zveElectronics, Zvikamu, Maitiro uye Zvishandiso. Joinha zvese zvemagetsi zvakasikwa panzvimbo imwechete. Isu tinoratidzira yedu diki switch, inogumira switch, tsoka switch uye switch yekuchinja ipapo. Zvigadzirwa zvedu zvinokwezva kutarisisa kwevazhinji vi ...
Yakagadziridzwa yepamutemo webhusaiti
Kuti tishandire vatengi vedu zvirinani, webhusaiti yedu yepamutemo (www.chinalema.com) yakagadziridzwa. Icho ruzivo rwechigadzirwa rwakanyanya kuwanda. Vashandi vevatengi vari online panguva chaiyo yekupa mhinduro kumutengi.
Kana iwe uchifarira kutsvaga zvimwe nezve microswitches, iwe uri kurudyi peji. Muchikamu chino, isu tichaenda kutarisa mumhando dzakasiyana dze micro switch. Izvi zvinokubatsira iwe kusarudza yeyuniti yeyuniti kusangana nezvinodiwa zveprojekti. Ichi chinyorwa chinokupa iwe nzwisiso yakadzama mu6 t ...
Push Button Micro Chinja, Toggle Chinja, Pushira Bhatani Footswitch, Magetsi Toggle Chinja, Shandura Shandura Bhoot, Micro Push Bhatani Micro Chinja Hapana Nc Pamwechete,